Baarlamaanka oo maanta la horgeynayo qaraar ka dhan ah Darbiga Kenya ka dhiseyso Xuduuda | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Baarlamaanka oo maanta la horgeynayo qaraar ka...
Guddiyada Arrimaha Dibadda iyo Arrimaha Gudaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo diyaariyay qaraarkan maanta la horgeynayo Baarlamaanka.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa go’aan cad ka qaadan doona qaraarkan ku saabsan darbiga ay Kenya ka dhiseyso xuduuda, iyagoo si adag uga fal celin doona wararka sheegaya in Kenya ay bur burisay dhamaan calaamadihii xuduuda muujinayay ee ku yaallay dhanka degmada Beled-xaawo ee Gobolka Gedo.
Hab-dhowraha Baarlamaanka Xildhibaan Maxamed Cumar ayaa sheegay in kulanka maanta uu yahay mid ka duwan kulamadii hore, isla markaana Xildhibaanada dood kulul ka yeelan doonaan darbiga Kenya rabto inay ka dhisto xuduuda.
“Maanta oo taariikhdu tahay 14 November oo maalin sabti ah, waxaa jira kulanka Baarlamaanka, waxaana dood adag oo aad kulul laga yeelanayaa darbiga kenya, waxaa la horkeenayaa Baarlamaanka qaraar ku saabsan arrintaas oo ay soo diyaariyeen Guddiyada Arrimaha Dibadda, Arrimaha Gudaha iyo Amniga”ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Cumar.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa maalmihii u dambeeyay si aad ah uga qeyla-dhaamiyay, kana dhiidhiyay darbiga ay kenya ka dhiseyso xuduuda oo la sheegay inay ku soo durugtay xuduuda, isla markaana dadka ku nool Gedo ay arrintan walaac ka muujiyeen.